Translate Corsican to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Corsican to Myanmar (Burmese), Corsican to Myanmar (Burmese) translations, Corsican to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Salute cumu stai မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Ci hè qualcosa? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Amu veramenti tantu ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Quantità questu cusì? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Pudete chjamarè un taxi? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Mi dispiace ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Ju interessu ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
U mo volu era retardatu အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Sò quì per l'affari ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Hello, u mo nome hè မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Mi dispiaci, ma sò sposatu ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Vogliu dumandàadumanda ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Pudete pigliate à l'aeroportu? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Chì ci hè u tempu ora, per piacè? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Induve hèastazione polizia più cercana? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Puderaghju prestu u telefunaghju di u telefunu? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Mi poi aiutà? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Ordienu un beatu, per piacè? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Quantu ci costu? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Sò allergii à u glutine ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Truverà u duttore ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Ci hè un duttore? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Puderaghju un chjamu? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Chjamate u vostru u capu per piace. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Stu locu hè assai bellu ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Pigliate à l'hotel per piacè ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Qualessu hè u mo numeru di stanza? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?